OpenSSH 8.6 inogadzirisa kusagadzikana uye nedzimwe shanduko dzakakosha | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni ye OpenSSH 8.6, yakavhurwa kuitiswa kwemutengi uye sevha yekushanda pamwe neSSH 2.0 uye SFTP protocols.
Kune avo vasingazive nezve OpenSSH (Vhura Yakachengeteka Shell) vanofanirwa kuziva izvo iyi seti yezvishandiso inobvumidza yakavharidzirwa kutaurirana pamusoro penetiweki, uchishandisa SSH protocol. Yakagadzirwa senge yemahara uye yakavhurika imwe nzira kune Yakachengeteka Shell chirongwa, inova yepfuma software.
Iyo OpenSSH suite inosanganisira inotevera kuraira mutsara zvinoshandiswa uye madhimoni:
scp: inova chinotsiva rcp.
sftp - Chinotsiviwa ne ftp yekuteedzera mafaera pakati pemakomputa.
ssh - Chinotsiva rlogin, rsh, uye telnet kubvumidza Shell kuwana kumushini uri kure.
ssh-wedzera uye ssh-mumiriri: seti yezvishandiso kugonesa chokwadi nekuchengeta makiyi akagadzirira uye kudzivirira kudiwa kwekuisa mapassword nguva dzese dzaanoshandiswa.
ssh-keygen - Chishandiso chekutarisa nekugadzira RSA, DSA, uye elliptical curve makiyi ayo anoshandiswa kune mushandisi uye kuitisa kwechokwadi.
ssh-keyscan: inoongorora rondedzero yevagari uye inotora makiyi eruzhinji.
sshd: iyo SSH server daemon.
1 Main nyowani maficha eOpenSSH 8.6
2 Maitiro ekuisa OpenSSH 8.6 paLinux?
Main nyowani maficha eOpenSSH 8.6
Iyo itsva vhezheni inogadzirisa kushushikana mukuitwa kweLogVerbose rairo, iyo yakaonekwa mune yazvino vhezheni uye inobvumidza iwe kukwidza danho rekugadzirisa ruzivo rwakakandirwa murejista, kusanganisira kugona kusefa nematemplate, mabasa, uye mafaera ane hukama nekodhi yakaitwa. nerubatsiro rwakabviswa mu sshd maitiro akasarudzika mune sandbox nharaunda.
Anorwisa anowana kutonga kubva pane isina rukudzo maitiro pamwe nekusagadzikana kusingazivikanwe unogona kutora mukana weiyo LogVerbose nyaya kudzivirira kupatsanura nzvimbo yekuyedza uye kurwisa chiitiko chakakwira.
Iko kunetseka muLogVerbose kunoonekwa kunge kusingaite mukuitasezvo iyo LogVerbose yekugadzika yakaremara nekutadza uye inowanzo shandiswa chete panguva yekugadzirisa. Kurwiswa kunodawo kutsvaga kusagadzikana kutsva munzira isina rukudzo.
Kune rimwe divi, kweshanduko dzakaitwa muOpenSSH 8.6 isina hukama nekutadza. Tinogona kuzviwana imwe nyowani yekuwedzera "protocol@openssh.com" yakaitwa pa sftp uye sftp-server, iyo inobvumidza iyo SFTP mutengi kuti awane ruzivo nezve server server, kusanganisira yakanyanya pakiti saizi uye kuverenga / kunyora miganho
MuSftp, kuwedzerwa kutsva kunoshandiswa kuti usarudze rakanakisa bhokisi saizi yekutamisa dataUye zvakare, iyo ModuliFile kumisikidzwa yakawedzerwa kune sshd_config ye sshd, ichikubvumidza iwe kudoma nzira inoenda ku "moduli" faira rine mapoka eDH-GEX.
Iyo nharaunda inoshanduka TEST_SSH_ELAPSED_TIMES yakawedzerwa kune zviyedzo zveyuniti kubvumidza kuratidzwa kwenguva yakapfuura kubvira kutanga kweumwe neumwe bvunzo.
Iyo GNOME password yekukurumidza yakakamurwa kuita sarudzo mbiris, imwe yeGNOME2 uye imwe yeGNOME3 (contrib / gnome-ssk-Askpass3.c). Iyo GNOME3 musiyano inoshandisa gdk_seat_grab () kudzora keyboard uye mbeva kubatwa kuvandudza kuenderana kweWayland.
Uye zvakare yakawedzera nyoro-isingabvumire kune fstatat64 system kufona kune seccomp-bpf yakavakirwa Linux sandbox.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni, unogona kutarisa ruzivo nekuenda kunotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa OpenSSH 8.6 paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyi nyowani vhezheni yeOpenSSH pane avo masisitimu, nekuti izvozvi vanogona kuzviita kurodha pasi kodhi kodhi yeiyi uye vachiita muunganidzwa pamakomputa avo.
Izvi zvinodaro nekuti iyo vhezheni nyowani haisati yaverengerwa mumachengeterwo ezvekutanga zvekuparadzirwa kweLinux. Kuti uwane iyo kodhi kodhi, iwe unogona kuita kubva ku next link.
Waita kurodha pasi, ikozvino tava kuzobvisa pasuru yacho nemirairo inotevera
Isu tinopinda dhairekitori rakagadzirwa:
Y tinogona kuumbiridza ne inotevera mirairo:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » OpenSSH 8.6 inogadzirisa kusagadzikana uye nedzimwe shanduko dzakakosha